Maitiro ekugovana mafoto nevamwe vanhu muIOS 12 | IPhone nhau
Maitiro ekugovana mapikicha nevamwe vanhu muIOS 12
Unoenda parwendo neshamwari, kana kunodya yemhuri, uye panogara paine mumwe munhu arikutora zvekutora mafoto ne iPhone yavo nyowani nyowani, achivimbisa kuti vanozovagovana gare gare. Nekudaro iyo nguva haina kumbouya, kana mune yakanakisa kesi, iwe unofanirwa kugadzirisa mifananidzo yakatumirwa kuburikidza neWhatsApp nekurasikirwa kwemhando izvi zvinofunga.
Kuisa mafoto kunzvimbo yekuchengetera senge Google Drive, Dropbox kana yakafanana haisi sarudzo yekuti munhu wese anoziva maitiro, zvisinei Ne iOS 12 isu tine imwe nzira nyowani inoshanda kune wese munhu uye unogona kukurumidza kugovera yakazara albham kune iPhone kana Android vashandisi, uye muhunhu hwepakutanga. Tinotsanangura kuti sei.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kugovana dambarefu rauinaro mune yako Mifananidzo application. Nechikonzero ichi, zvinokodzera kuti mapikicha ese erwendo irwo kana chiitiko zvakarongeka muarubhamu sezvo urikutora ivo kuti vakurumidze basa. Kana iyo albhamu yapera unogona kuigovana nemunhu wese waunoda. Vhura iyo albham, tinya pane yekumusoro chikamu, panowanikwa zita, uye iwe uchaona chiono chitsva chayo mauri uchafanirwa kudzvanya pane «…» inoonekwa kumusoro kwepamusoro chikamu.
Sarudza "Goverana mapikicha", uye sarudza iwo aunoda kugovana (kana kuasiya sezvazviri kugovana iwo ese) uye tinya pane rinotevera. Mapikicha anozopa otomatiki vanogamuchira zvichibva nekuti ndiani waanoziva mumifananidzo, asi unogona kumaka kana kuwedzera zvimwe kana uchida. NeMessage kana neSMS iwe unowana chinongedzo icho munhu wese anogona kuwana icho albamo kubva kune yako iPhone, iPad kana kubva chero webhu bhurawuza kana Android chishandiso, uye dhawunorodha mifananidzo.
Kana vaine iPhone kana iPad vanogona kutowedzera ivo kuRaibhurari yavo zvoga. Icho chimwe chezvinhu zvinonakidza kwazvo izvo iOS 12 inosanganisa uye izvo imi mose munogona kunakidzwa kubva munaGunyana anotevera, zuva iro rinotarisirwa kuburitswa senge yepamutemo vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Maitiro ekugovana mapikicha nevamwe vanhu muIOS 12
Iwe murume, kutumira neSMS kunofungidzira mubhadharo kune iye anotumira meseji. Kune izvo iwe unovatumira ivo zvakananga neemail.
Pindura ku scl
Zvinoenderana nehuwandu hwemifananidzo… edza kutumira mazana maviri emifananidzo neemail. Kuwedzera kune chokwadi chekuti huwandu hwakawanda hwemitengo hwatove unosanganisira risingaperi SMS
Apple inoburitsa iOS 12 beta 7 yevagadziri uye isu tinorasikirwa nekushanda
Kunyange iyo Galaxy Watch kana iyo Galaxy Kumba haikwikwidzi kune avo vanokwikwidza maApple